रगतमा अक्सिजन कम हुँदा देखिने लक्षणहरु « गोर्खा आवाज
रगतमा अक्सिजन कम हुँदा देखिने लक्षणहरु
काठमाण्डौँ । मानिस बाँच्ने नै अक्सिजनले (Oxygen) हो. अक्सिजन बिना कुनैपनी जीवित प्राणी बाँच्न सम्भव छैन. पृथ्वीमा अक्सिजन प्रसस्त मात्रामा पाइन्छ र यहि कारणले गर्दा पृथ्वीमा जीवन छ ।
तपाईं बिरामी भएर हस्पिटल जाँदा हातको बुढी औंलामा चेप्ने एउटा सानो मेसिन जोडेको देख्नु भएको छ होला । यसले तपाइको शरीरमा अक्सिजनको मात्रा कति प्रतिशत सम्म छ भनेर नाप्दछ. तपाइको रगतले फोक्सोबाट कति अक्सिजन बोकेर शरीर भरी पुर्याएको छ ? उक्त कुरा औंलामा जोडिएको मेसिनले देखाउछ ।
तपाइको शरीरमा अक्सिजनको मात्रा कम भएको तपाइले आफै थाहा पाउनु हुन्न र तपाइले थाहा नै नपाइ गम्भिर अवस्था आउन सक्छ ।
तपाइले सुन्नु भएको छ होला कि जाडो समयमा गिजर बाट नुवाउने क्रममा बाथरुम मै मानिसहरुको मृत्यु भएको, कोठामा हिटर बालेर सुत्दा मानिसहरुको मृत्यु भएको, उकालो पहाड, हिमाल चढ्दा लेक लागेको, ठुलो सेफ्टी ट्यांकीमा पसेर काम गर्ने क्रममा मानिसहरुको मृत्यु भएको र बचाउन जाने मान्छेको पनी मृत्यु भएको खबर समाचारमा पनि धेरै प्राय आइ रहन्छन ।
यस्ता घटनाहरु अक्सिजनको कमि भएर हुने गर्दछ. अक्सिजन कमी भएको लक्षण व्यक्तिले थाहा नै नपाइ मृत्यु हुने गर्छ । हामीले स्वास फेर्दा हाम्रो फोक्सोले अक्सिजन लिन्छ र रगतले त्यो अक्सिजन बोकेर शरीरभरी पुर्याउदछ । तर यदि रगतले अक्सिजन बोकेर शरीर भरी पुर्याउन सकेन भने हामीलाई विभिन्न लक्षणहरु देखिन्छन ।
तपाईंले ३ वटा मुख्य कुराहरुमा बिचार गर्नुहोस । तपाईं भएको ठाँउमा प्रयाप्त अक्सिजन छ कि छैन ? त्यो बिचार गर्नुपर्छ ।‌ चाहे खाल्टामा पस्दा होस, चाहे पहाड चढ्दा होस, चाहे गुफामा पस्दा होस । अक्सिजन कमी हुने बितिकै तपाइको मस्तिस्क, कलेजो खराब हुन थाल्छ र शरीरको केशिकाहरु, ओठ, नाकमुख, हातखुट्टा सबै निलो हुन थाल्छन र केही मिनेटमै मस्तिस्कले काम गर्न छोड्छ । रगतमा अक्सिजनको कमी हुनु अत्यन्तै खतरनाक अवस्था हो । लक्षण देखिँदा-देखिँदै मानिसको मृत्यु हुन सक्छ ।
रगतमा अक्सिजन कम हुँदा देखिने लक्षणहरु (Low Oxygen Levels in Blood) :
शरीरमा अक्सिजन कम भयो भने स्वास-प्रस्वास छिटो-छिटो हुन्छ । धेरै थकान लाग्छ, स्याँ-स्याँ बढ्छ । शरीरले अक्सिजन प्रस्सत मात्रामा नपाउँदा छोटो-छोटो स्वास-प्रस्वास हुन थाल्छ । जब शरीरले प्रसस्त मात्रामा अक्सिजन प्राप्त गर्न सक्दैन तब हामिलाइ टाउको दुख्न थाल्छ, रिंगटा लाग्न थाल्छ, कसैको त्यतिकैमा बेहोस भएर मृत्यु पनी हुन सक्छ।
यस्तो बेलामा तपाइँलाइ अक्सिजन कम भएको लक्षणहरु देखिन थालेका हुन्छन् । यदी बाहिर निस्कन ढिलो गर्नु भयो भने भन्न सकिन्न, मृत्यु पनि हुन सक्छ । त्यसैले कुनै पनि गुफा, बन्दकोठा, भेन्टीलेटर नभएको घरका कोठा भित्र लामो समय बस्न हुँदैन ।
त्यती मात्र होइन तपाइलाई गम्भिर प्रकारको सँक्रमण भएको छ भने पनी तपाइको शरीरमा प्रसस्त मात्रामा अक्सिजन नपुगेको हुनसक्छ । कोरोना सङक्रमण भएर हस्पिटल जाने मानिसहरुमा यो समस्या देखिने गर्छ । यदि तपाइको शरीरमा अक्सिजन को मात्रा कमी भएको छ भने डाक्टरहरुले तपाइलाई गम्भिर बिरामीको रुपमा राखेर उपचार गर्दछन।
कोरोना सँक्रमण भएका अधिकाँस मानिसहरुको फोक्सोमा समस्या देखिने भएकाले, फोक्सोमा निमोनिया हुने भएकाले फोक्सोले प्रसस्त मात्रामा अक्सिजन तान्न सक्दैन र शरीरमा अक्सिजन को कमी हुन थाल्छ जसले गर्दा बिरामी मानिस झनै गम्भिर हुँदै-हुँदै जान्छ । हातको औंलामा जोडेको सानो अक्सीमिटरले रगतमा कती अक्सिजन छ भनेर देखाउँदछ । त्यसलाई SPO2 टेस्ट पनि भनिन्छ ।
रगतमा अक्सिजन कम हुने कारणहरु :
शरीरमा रगतको मात्रा कमी हुँदा पनि अक्सिजनको मात्रा कमी हुनसक्छ ।
फोक्सोमा पानी जमेको छ भने रगतमा अक्सिजन कम हुने गर्छ ।‌
मुटुको धमनीमा रगत जमेको छ भने रगतमा रगतमा अक्सिजनको मात्रा कमी हुन्छ ।
जो मानिस नियमित चुरोट तान्छ, उसको शरीरमा अक्सिजनको कमी हुन सक्छ ।
जो मानिस फोक्सोको रोगी छ, उसलाइ अक्सिजनको कमी हुन सक्छ ।
उच्च हिमाली भागहरुमा जाँदा त्यहाको वातावरणमा अक्सिजनको कमि हुने हुँदा मानिसलाइ लेक लाग्ने गर्दछ. लेक लाग्नु भनेको शरीरले प्रसस्त मात्रामा अक्सिजन प्राप्त गर्न नसक्नु हो ।
मुटुको रोगी हुनेहरुलाई पनि रगतमा अक्सिजन कम हुने गर्छ ।
दमको रोगी मानिसलाइ पनि अक्सिजन कम हुने गर्छ.
भाइरस सँक्रमण हुँदा पनि शरीरमा अक्सिजनको मात्रा कम हुने गर्छ ।
त्यसैगरी विभिन्न औषधी खाइरहने रोगी मानिसहरुलाई पनि अक्सिजनको कमी हुन जान्छ र नसालु पदार्थ खाने मानिसहरुलाई पनि नसाले स्वास-प्रस्वास ढिलो गराइ दिन्छ जसले गर्दा शरीरमा प्रसस्त मात्रामा अक्सिजन पुग्दैन ।
रगतमा अक्सिजन कम हुँदा ध्यान दिनु पर्ने कुरा :
रगतमा अक्सिजन कमी हुनु ज्यादै खतरनाक अवस्था हो । जति-जति अक्सिजनको मात्रा घट्दै जान्छ, उति-उति मानिस बेहोस हुने अवस्थामा पुग्छ र थाहा नपाइ सुतेकै ठाउँमा मृत्यु हुन सक्छ ।